Baarlamaanka Soomaaliya oo riday Raysulwasaare Xasan Cali Khayre iyo golihiisa wasiiradda - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaBaarlamaanka Soomaaliya oo riday Raysulwasaare Xasan Cali Khayre iyo golihiisa wasiiradda
July 25, 2020 Puntland Mirror Somalia 0
Raysulwasaaraha Dowladda Federaalka Soomaaliya Xasan Cali Khayre. [Sawir Hore]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Golaha baarlamaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta oo Sabti ah xilkii ka qaaday Raysulwasaare Xasan Cali Khayre iyo golihiisa wasiiradda, sida uu sheegay guddoomiyaha baarlamaanka Maxamed Mursal Cabdiraxmaan.
170 xildhibaan ayaa u codeeyay xilka ka qaadista Raysulwasaaraha iyo golihiisa wasiiradda, sida uu sheegay guddoomiyuhu.
Madaxweynaha Dowlaladda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa aqbalay go’aanka ka soo baxay golaha baarlamaanka, sida lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay madaxtooyada.
Waxaana uu sheegay in uu Raysulwasaare si deg-deg ah uu u soo magacaabi doono.
“Madaxweyne Farmaajo wuxuu si degdeg ah usoo magacaabayaa Ra’iisul Wasaare soo dhisa xukuumad dalkan ka saarta marxaladdan kala guurka ah, siina xoojisa adeegyada bulsho ee dalka.” Ayaa lagu yiri war-saxaafadeedka.
Maxkamada ciidamada Soomaaliya oo toogasho ku fulisay labo xubnood oo Al-Shabaab ah gudaha Muqdisho
Garoowe-(Puntland Mirror) Maxkamada ciidamada Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa maanta Isniin ah dil toogasho ah ku fulisay labo xubnood oo katirsan maleeshiyada Al-Shabaab. Labada xubnood ayaa lagu eedeeyay in ay nabadoon Cabdiraxmaan Ciise Cali Xasan ku [...]
Soomaaliya oo ka codsatay Interpol xirista wasiirkii amniga Jubbaland ee baxsadka ah
Muqdisho-(Puntland Mirror) Soomaaliya ayaa ka codsatay boliiska caalamiga ah ee Interpol xirista wasiirkii amniga maamul goboleedka Jubbaland Cabdirashiid Xasan Nuur, sida lagu sheegay bayaan ka soo baxay ciidanka booliiska Dowladda Federaalka Soomaaliya. “Dowladda Federaalka Soomaaliya [...]